Tantara: Zazalahy Iray Nianjera teo Am-patoriana - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Rehefa hitan’i Paoly fa maty ilay zazalahy, dia nitsotra teo amboniny izy ary namihina azy. Dia hoy izy: ‘Aza very hevitra. Tsy maninona izy!’ Ary izany tokoa no izy! Fahagagana izany! Naverin’i Paoly ho amin’ny ﬁainana izy! Faly aoka izany ny vahoaka.
Vao avy nahavita ny diany fahatelo nanaovana ﬁtoriana i Paoly, ary eo an-dalana handeha hody izy. Tamin’io diany io dia nijanona telo taona tao amin’ny tanànan’i Efesosy fotsiny i Paoly. Koa mbola lavalava kokoa ihany noho ny diany faharoa io dia io.
Rehefa niainga tao Troasy ny sambo dia nijanona kely tao Mileto. Satria kilaometatra vitsivitsy monja avy eo i Efesosy, i Paoly dia nampaka an’ireo anti-panahin’ny ﬁangonana mba ho tonga ao Mileto. Amin’izay dia ho afaka hiresaka farany amin’izy ireo izy. Taorian’izany, rehefa tonga ny fotoana hiaingan’ny sambo, dia nalahelo aoka izany izy ireo nahita an’i Paoly lasa!
Asan’ny Apostoly toko faha-19 ka hatramin’ny faha-26.
Ahoana no nanararaotan’i Paoly ny maha teratany romanina azy, mba hanatontosany ny asa ﬁtoriana nanirahan’i Jesosy? (Asa. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Lioka 21:12, 13)